Isingeniso senqubo ye-CNC Machining | I-Blog | I-PTJ Hardware, Inc.
Ikhaya > Blog > Inqubo isingeniso
Linembe Kangakanani Izingxenye Zokuphrinta ze-3D?
"Kuyini ukunemba kwezingxenye zakho ze-3D eziphrintiwe?" Lo ngumbuzo ovame ukubuzwa ngabasebenzi bokuphrinta be-3D. Manje kuyini ukunemba kokuphrinta kwe-3D? Impendulo yalo mbuzo incike ezintweni eziningi, uhlobo lobuchwepheshe be-3D bokuphrinta, isimo sephrinta ye-3D nezilungiselelo zamapharamitha wokuphrinta, izinto ezikhethiwe, ukwakheka kwemodeli, njll.
Umsuka Nezimpawu Zomshini WaseSwitzerland
Umshini waseSwitzerland igama eligcwele yi-CNC lathe ehamba phambili, ingabizwa nangokuthi i-headstock yeselula ye-CNC lathe othomathikhi, ithuluzi lomshini wokuguqula umshini wokonga noma wokwehlisa. Kuyinto imishini yokucubungula ngokunemba engaqedela i-lathe, i-milling, imishini, isicefe, ngokuthepha, ukuqopha nokunye ukucubungula okwakhiwe ngasikhathi sinye. It is ikakhulukazi esetshenziselwa batch ukucutshungulwa ngokunemba hardware kanye shaft ekhethekile ezimise izingxenye non-standard.
Ukuhlola Nokuzijwayeza Kwemodi Yokuphatha engu-6S Ekufundiseni Imishini Yokuqeqesha
Sebenzisa imodi yokuphatha engu-6S ekufundiseni ngomshini nangokwezigesi ukuqeqeshwa kwamakhemikhali aphezulu, uhlanganise ulwazi, ikhono nemfundo esezingeni, futhi uhlanganise ukufundiswa kokuqeqeshwa nokukhiqizwa kwangempela kwamabhizinisi anamuhla, angenza abafundi bakwazi ukuqwashisa ngobuchwepheshe futhi wakhe imikhuba emihle yobungcweti. , Unamakhono amahle kakhulu wokuthuthukisa ikhwalithi yobungcweti.
Izindleko Control Futhi Ukusebenzisela Of CNC Machining Inqubo
Enqubeni yokwenza imishini, ngokulawula nokwenza ngcono izindleko zezimboni, inhloso yokonga izindleko zokukhiqiza nokwenza ngcono izinzuzo zezomnotho zebhizinisi ingafinyelelwa.
Ukuhlaziywa kobunzima ku-Machining Gray Cast Iron
Imiphumela ikhombisa ukuthi okuqukethwe kwe-S ne-P kwama-26 # iron iron kwakungaphezulu kohlangothi oluphakeme, okuqukethwe yi-Si ye-22 # iron iron kuphansi, ngakho-ke izingoma zamakhemikhali aziyanelisi imibandela. Ukulingana kwekhabhoni kokuphonswa kungu-4.36%, okuwukukhishwa okuphezulu okulingana nekhabhoni.
Ukuthuthukiswa Kwesistimu Yesimo Se-Aerospace Shell
Ngokuya ngocwaningo lwangaphambilini lwethiyori, kanye nenqubo yokwenziwa kwezidingo zezingxenye ezijwayelekile zegobolondo lomkhumbi-mkhathi, ukuze kuzuzwe ukukhishwa kwezici zokukhiqiza zezingxenye, ithuluzi lokukhipha isici lenzelwe ngokususelwa ku-Siemens NX10.0 secondary development API .
Inqubo Yokukhiqiza Ukuhlelwa Kwemizila Kususelwa Ekugomeni Okucacile
Njengamanje, ukuhlelwa komzila wenqubo yezingxenye zegobolondo lomkhumbi-mkhathi kusencike kakhulu kokuhlangenwe nakho konjiniyela, okungakwazi ukuzivumelanisa nemodi yokukhiqiza ye- "multi-type, small-batch", futhi kunezinkinga ezinjengokusebenza kahle okuphansi nekhwalithi engalingani. Ngakho-ke, ucwaningo ngokuhlelwa okuhlakaniphile kwendlela yenqubo luyadingeka kakhulu.
Ukuhlaziywa Kwesici Sokusebenza Kwemishini Engamakhompiyutha Amancane
Ukuthatha isampuli ejwayelekile yokufaka into, into efundwayo ehlukahlukaniswa nobuso bezindawo ezahlukahlukene zemishini, kuyahlaziywa izici zobuso bendawo ezitholwe yimishini eyahlukahlukene, futhi nobuso bendawo enobulukhuni obuhlukile obutholwe ngendlela efanayo yemishini buyabonwa .
I-CNC Machining Vs Imishini Yesiko
Inqubo ye-CNC machining uhlobo olusha lwenqubo yobuchwepheshe ngokusekelwe kwinqubo yendabuko yemishini, engaqinisekisa ukunemba kwezingxenye. Ucwaningo nokuthuthukiswa kwamanani wokulawulwa kwemishini ubuchwepheshe kungenza ubuchwepheshe bemishini busebenze kangcono, buhlangabezane kangcono nezidingo zenqubo yokukhiqiza, kunciphise utshalomali lwabasebenzi bokukhiqiza, babe nezici eziphezulu zokuzenzekelayo, futhi babe nethemba elingcono ekuthuthukisweni kwesikhathi esizayo.
Ukusetshenziswa Kwama-Magnesium Alloy Materials Kumarobhothi Alula
Ngokuthuthukiswa komkhakha wesimanje, izinhlobo nezinkundla zokusebenzisa zamarobhothi ziyaqhubeka nokwanda. Ngokwokwahlukaniswa kwamarobhothi anamuhla, amarobhothi angahlukaniswa amarobhothi wensizakalo yobungcweti namarobhothi asiza emakhaya. Imboni yezingxenye zamarobhothi ezicubungula i-PTJ nayo iyachuma.